Dib u dhigista booqashooyinka caafimaad ee la filayay kahor Ogosto 2, 2021
Amarku wuxuu ku siinayaa dib u dhigista suurtagalka ah ee booqashooyinka caafimaadka ee dhacaya ka hor Ogosto 2, 2021.
Xusuusnow, si kastaba ha noqotee, in dhammaan booqashooyinka caafimaad aan dib loo dhigi karin. Wareegto ayaa sidaa ku oggolaatay dib u dhigista ugu badnaan hal sano ka dib markay dhacdo:
booqashada ugu horeysa ee macluumaadka iyo kahortaga (marka laga reebo kooxaha qaarkood ee halista kujira: caruurta yar yar, haweenka uurka leh, shaqaalaha habeenkii, iwm) iyo cusboonaysiinta; cusbooneysiinta imtixaanka aqoonta iyo booqashada dhexdhexaadka ah ee shaqaalaha ka faa'iideysanaya kormeerka la xoojiyay marka laga reebo shaqaalaha ay ku dhacaan shucaaca ionizing ee lagu tilmaamay qeybta A
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan maqaalkeena "Booqashooyinka caafimaadka ee 2021: waa maxay waajibaadkaagu? ".
Wareegtadan oo faahfaahinaysa booqashooyinka laga yaabo ama laga yaabo in dib loo dhigo waxay khuseysaa oo keliya booqashooyinka caafimaad ee la qorsheeyay ka hor Abriil 17, 2021. Qoraal cusub ayaa sidaas darteed waa in si dhakhso leh loo ansixiyaa si loo tixgeliyo kordhinta qiyaasta dib u dhigista.
Haysashada doorka cusub ee dhakhtarka shaqada ilaa Ogosto 1, 2021
Si wanaagsan loola dagaallamo Covid-19, xuquuqo cusub ayaa la siiyay dhakhaatiirta ...
Caafimaadka Shaqada: kordhinta dib u dhigista booqashooyinka caafimaadka iyo waajibaadka cusub ee dhakhtarka shaqada July 10th, 2021Tranquillus
READ Mounir: "Tababarkani wuxuu ii metelayaa nooc ka mid ah guga"
horeXaq miyaan u leeyahay inaan weydiiyo dhakhtarkaaga shaqada faylkaaga caafimaad ee shaqaalaha?
socdaWaxaan jecelahay inaan iraahdo cilmi baaristu ma ahan orod, laakiin waa maaratoon!
Dhismooyinka u furan dadweynaha: caqabadaha iyo masuuliyadaha
Xooji xirfadahaaga higaada